Shiinaha Soo-saaraha Plywood-ka caaga ah iyo alaab-qeybiye | Roc
ROCPLEX Plywood caaga waa plywood tayo sare leh oo loo adeegsado dhismaha oo lagu daboolay balaastigga 1.0mm oo isu beddelaya caag ilaalin ah inta lagu jiro wax soo saarka. Geesaha waxaa lagu shaabadeeyey rinjiga acrylic-biyo-faafi kara.
Plywood-ka caaga ah waa plywood la farsameeyay oo tayo sare leh laguna dabaqi karo, waxaa si balaaran loogu isticmaalaa dhismaha guriga, dhismaha Wadooyinka, Mashaariicda la taaban karo ee weyn, biriijyada birta, iwm.
ROCPLEX PPE plywood balaastig ah oo lagu daboolay polypropylene daahan labada dhinac ee 1.6 mm qaro weyn.
Dahaadhku wuxuu gebi ahaanba yareeyaa nuugista dusha balaastigga ah ee qoyaanka guddiga shaqada.
Guryaha alwaaxda marka la barbardhigo plywood ilaalinta geeska caadiga ah: Laba dhar oo midab acrylic ah aan biyuhu lahayn.
ROCPLEX plywood caag ah oo xoog leh, xasiloon, qaab-dhismeed la taaban karo
ROCPLEX Faahfaahinta Plywood Caaga
Weji iyo Dib
0.8mm dhinac caag ah
Xudunta Poplar / Combi core / Hardwood core / Pine core / Birch core
Xabagta MR, xabagta WBP, xabagta Phenolic
4-28mm (dhumucda caadiga ah: 12mm, 15mm, 18mm, 21mm)
In ka badan 50 jeer
ROCPLEX Caaga Plywood Advantage
Haddii lagu shubo biyo karkaraya 72 saacadood, weli way ku dheggan tahay oo aan qaab lahayn.
Dareenka jirka wuu ka fiican yahay wasakhda birta wuxuuna qancin karaa shuruudaha dhisida caaryada, kuwa birta ah way fududahay in la qaabeeyo waxayna si dhib leh uga soo kaban karaan jilicsanaanta xitaa ka dib marka la dayactiro.
Haddii loo isticmaalo u hoggaansanaanta sawirrada si adag, dib ayaa loo isticmaali karaa in ka badan 50 jeer.
Yaraynta kharashka si aad ahna looga fogaado qasaarooyinka (si dahaar ah iyo nabaad-guurka caaryada birta ah).
Waxay xallisaa dhibaatooyinka daadashada iyo dusha sare ee dusha sare inta lagu jiro hawsha dhismaha.
Gaar ahaan ku habboon waraabinta mashruuca la taaban karo, wuxuu ka dhigi karaa dusha sare ee shubka dusha sare iyo flat.
ROCPLEX Caaga Plywood Badbaadi waqtiga, shaqada iyo cos
ROCPLEX plywood caaga ah Kaydso kharashka
Ku gaar ahaw xabagta fenoliga iyo filimka
Filimka soo wajahay plywood waa la kala jari karaa oo si isdaba joog ah ayaa loogu isticmaali karaa labada weji, taas oo keydin doonta 25% kharashka
Ku habboonaynta darajada gaarka ah ee xudunta
Gaar u noqo koollo
ROCPLEX caaga plywood gaabin Muddada
Saamaynta ugu wanaagsan ee demoulding
Gaabin 30% muddada.
Iska ilaali dib u dhiska derbiga
Sahlanaaw inaad kadiso oo isku qasdo
ROCPLEX caaga plywood tayo sare leh ee shubay
Wajiyada fidsan oo siman
Wajiyadu way siman yihiin oo waa siman yihiin, iyagoo ka fogaanaya dhiig baxa haraaga iyo shubka.
Qaab dhismeedka biyuhu iyo neefsashada
Geesaha si taxaddar leh ayaa loo safeeyey
ROCPLEX Caaga Plywood padking Oo Loading
ROCPLEX Filim Wajahay Plywood Certified By
Hore: Xirxirida plywood